Khubaza uGcino lweWindows kwiWindows 8 | Iindaba zeGajethi
Khubaza iVenkile yeWindows yeWindows yeWindows
Mhlawumbi kubantu abaninzi oku kuye kwaba yimfuno enkulu, kuba kwiikhompyuter zabo ngekhe bazame ukwenza naluphi na uhlobo lokuthenga kuleVenkile yeWindows, yiyo loo nto Ukuyekiswa kwale nkonzo kunokuba yenye yeendlela ezizezinye eziceliweyo.
Ewe abanye abantu abambalwa bayenza le nkonzo ingasebenzi IWindows Store inokuba yinto engazange iviwe kwaphela, kuba uya kuhlala ufuna le nkonzo Ivenkile yeWindows ihlanganiswe njengenye yeethayile zeWindows 8, kuba awusoze wazi umzuzu apho sifuna ukufumana uhlobo oluthile lwesicelo okanye isixhobo esiluncedo somsebenzi wethu okanye sokonwabisa.
1 Khubaza iVenkile yeWindows
2 Buyisela umva inkqubo yokubuyisela kuGcino lweWindows
Khubaza iVenkile yeWindows
Yintoni eya kucetyiswa kweli nqaku kukuba ukukhubazeka kwenkonzo IWindows Store, oko akuthethi ukuba iya kukhutshwa ngokupheleleyo; Xa uyenza ingasebenzi, i-tile yale nkonzo ayizukunyamalala nokuba yeyiphi, kwaye inokuphinda inikwe amandla kamva ngokulandela inkqubo efanayo esiza kuyibonisa apha ngezantsi, kodwa ngumahluko omncinci ekugqibeleni, esiya kuwubonisa njengoko sichaza :
Kuqala kufuneka siqale iseshoni yethu 8 Windows.
La Ukuqala kwesikrini Ngumfanekiso wokuqala esiza kuba nawo.
Sinqakraza kwi-tile Desk imi ngasezantsi ngasekhohlo.
Nje ukuba kwidesktop, senze WIN + R key indibaniselwano.
Iwindow yethu yokuphunyezwa komyalelo iya kuvela.
Kwisithuba esiboniswe apho sichaza i-gpedit.msc
Siza kubona i «Umhleli woMgaqo-nkqubo weQela laseKhaya«.
Ngoku siza kuya «Useto lomsebenzisi«.
Kweli qela siza kukhetha «Izikhokelo zoLawulo«.
Ngoku siya ku «Izinto zeWindows«.
Ukusuka kwiziphumo kwicala lasekunene sikhetha «Ukuthenga«
Kukhetho ezi-2 eziboniswe apha, sikhetha leyo ithi «Yenza kungasebenzi iVenkile yokuSebenzisa«.
Siza kucofa olu khetho ngeqhosha lasekunene le mouse yethu kwaye ukhethe «Hlela«.
Ngala manyathelo alula esiwabonisileyo, siya kufumana ifestile apho ukhetho «Ayimiselwanga«, Oko kuthetha ukuba akukho senzo sithathiweyo kuGcino lweWindows; konke ekufuneka sikwenzile kukusebenzisa ibhokisi yesibini, Oko kukuthi, ehambelana ne «Inikwe amandla«. Emva kwexesha kunye nokugqiba inkqubo, kufuneka kuphela ucofe ku «aplicar»Kwaye kamva kwi«ukwamukela«.
Buyisela umva inkqubo yokubuyela kuyo IWindows Store
Ukuncedisa umbono wokuba besiphawule ngaphambili, ngokusetyenziswa kwe IWindows Store akuhlali bantu, ukuba siya kwithayile yakho siya kufumana umyalezo osazisa ukuba IWindows Store ayifumaneki kwikhompyuter.
Ukwenza ukuba isebenze kwakhona kwaye uqhubeke nokusebenzisa IWindows Store kwiqela lethu, kufuneka sibuyele kukhetho kuphela «Ayimiselwanga»Oko sikufumene kwinxalenye yokugqibela yenkqubo, oko kuthetha ukuba kufuneka silandele inkqubo efanayo kwasekuqaleni; Ukuqinisekisa ukuba ivenkile sele inikwe amandla, kufuneka siye kwithayile eyahlukeneyo kwaye ucofe kuyo, apho siza kubona ukuba ivenkile ivula isibonisa zonke izicelo ezikhoyo apho eziza kukhutshelwa nangaliphi na ixesha.
Njengokuqwalaselwa kokugqibela esinako cacisa inkqubo yokukhubaza usetyenziso lwe IWindows Store, into enokwenzeka ukuba ikhompyuter yakho iphethe abantwana ekhaya; Abazali banokukhubaza isicelo ukuze abantwana babo bangabinakho ukuthenga ngengozi, isilumkiso sokuthatha ukuba ivenkile sele ilungisiwe nekhadi lethu letyala.
Kubalulekile ukukhankanya ukuba le nkqubo inokuqhutywa kwiikhompyuter zakho ngeWindows 8, 8.1 Windows, Windows RT okanye Windows Pro, iinkqubo ezisebenzisa esi sicelo (iithayile) kwiScreen Screen; Kuya kufuneka sichaze ukuba umfundi unako jonga inkqubo efanayo kwiWindows 7, amanyathelo azakusebenza kude kube ngumzuzu wokufumana ukhetho "Ivenkile", okusingqongileyo kunye nokusetyenziswa okungenakubakho kule nguqulo yenkqubo yokusebenza kuba isebenza kuphela kwiWindows 8 ukubheka phambili.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Windows 8.1: Uhlaziyo lweWindows lweWindows
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Khubaza iVenkile yeWindows yeWindows yeWindows
IPenflip, umhleli olula wokusebenzisana kwi-Intanethi
myMail, umxhasi we-imeyile obalaseleyo we-Android kunye ne-iOS